China Chinyakare Chinese Mushonga Loquat Shizha Kugadzira uye Fekitori | Bestop
Chinese zita: pi pa ye
Chirungu Zita: Loquat shizha
ChiLatin Zita: Eriobotryae Folium
Shandisa Chikamu: shizha
Basa guru: Kuchenesa mapapu, kubvisa kukosora, kudzikisira kukanganiswa uye kumira kurutsa
Shizha reLoquat izita rechinyakare remushonga wechiChinese. Ishizha reEriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Iyo ine mhedzisiro yekuchenesa mapapu, kubvisa kukosora, kudzikisira kukanganiswa kwekuita uye kumisa kurutsa. Zviratidzo: kukosora nekuda kwemapapu kupisa, dyspnea, kurutsa nekuda kwedumbu kupisa uye dyspnea. Mashizha akareba kana obovate, akareba 12-30cm uye akareba 3-9cm. Apex inorwadza, base cuneate, margin zvakasiyana zvakasiyana sprateely, base yakazara. Kumusoro kwepamusoro kwakasvibira grey, yero yero kana yakatsvukuruka bhuruu, inopenya, uye iyo yepasi iri yakajeka grey kana brownish yakasvibira, yakazara yakafukidzwa nebvudzi yero. Main tsinga dzakakurumbira dzakasimudzwa pazasi pevhu, yekupedzisira mitsipa pinnate. Petiole mupfupi kwazvo, akafukidzwa nevhudzi rakatsvukuruka yero. Leather uye crisp, nyore kutyora. Iyo tambo inorwadza zvishoma.
Kuchenesa mapapu, kubvisa kukosora, kudzikisira kusagadzikana uye kumira kurutsa.
1. Kukosora nekuda kwemapapu kupisa uye dyspnea nekuda kweQi inversion: kuravira kwekuvava kunogona kuderedzwa uye hunhu hwekutonhora hunogona kujekeswa, iyo ine basa rekujekesa uye kudzikisa mapapu qi.
2. Dumbu kupisa, kurutsa uye dyspnea: Ichi chigadzirwa chinogona kubvisa dumbu kupisa, kuderedza dumbu qi uye kumisa kurutsa uye hiccup.
3. Western mushonga kuongororwa kweacute bronchitis, lobar pneumonia, pertussis, bronchiectasis ndeyedzinopisa phlegm mhando, yakaoma uye isingaperi gastritis, diaphragmatic spasm ndeyemudumbu moto.
1. Kuunganidzwa kwemateria medica: "kuwiriranisa dumbu, kudzikisa Qi, kubvisa kupisa, kubvisa kupisa kwezhizha, uye kurapa beriberi." Pasi peQi, moto unodzika uye phlegm ichave yakatsetseka, nepo avo vanopesana nayo vasingazo pikisana nazvo, avo vanorutsa havazorutse, avo vane nyota havazove nenyota, uye avo vanokosora havazokosora . "" Zvezvirwere zvemudumbu, muto wejinja unoshandiswa kupfeka, uye nezvezvirwere zvemapapu, huchi mvura inoshandiswa kupfeka. "
2. Zvinoenderana nerondedzero yaChongqing Tang, "zvinhu zvese zvinokonzerwa nemhepo, kupisa, kupisa uye kuoma mumapapu zvinogona kushandiswa kuchengetedza zvakapfava uye zvegoridhe, asi kurapa mutambo, uchinhuhwirira asi usingaome. iyo pathogenic zvinhu zvekunyorova, denda uye chepfu mudumbu zvinogona kushandiswa kubvisa iyo turbid uye kusvika Zhongzhou. ". Mushonga wemakwenzi, zvisinei, wakagadzirwa nekuda kwekugona kwazvo mukurapa chikosoro uye kunatsa neQi pasi payo.
Oral: decoction, 5-10g. Yokuderedza kukosora, yakakodzera kukangwa, uye nekumisa kurutsa, yakakodzera kurarama.
Kubva munguva yechando kusvika kune anotevera matsutso, apo madzinde nemashizha anooma kana maruva asina kudhonzwa, anounganidzwa nekucherwa.
Bvisa tsvina uye fluff, pfapfaidza nemvura, cheka uye woma.
Pashure: Mishonga Yembiriso Chinyakare Chinese Herbal Mushonga
Zvadaro: Tsika dzechiChinese Mishonga yeMidziyo Membrane YeGizzard yehuku
Chinese Herbal Mushonga
Herbal Mushonga Platycodon Grandiflorum
Tsika dzeChinese Herbal Mushonga Dodder
Yetsika Chinese Mushonga Semen Siz Spin ...
Wholesale Yetsika Chinese Chiremba mushonga Figwort
Wholesale YeChechi Chinese Mushonga Chine ...
Chinyakare Chinese Mishonga Yezvinhu Herba C ...
Wholesale Of Chinese Herbal Mushonga Puerariae ...
Mbishi zvinhu Angelica dahurica kugadzira